Andriavina, tanora mafana fo mandray andraikitra amin'ny fitantanana mahomby sy mangarahara | UNICEF Madagasikara
Andriavina, tanora mafana fo mandray andraikitra amin'ny fitantanana mahomby sy mangarahara
RATAFIKA ANDRIANARIVO Andriavina, 24 taona, mpisolovava tanora sady mpandalina politika, dia mpikambana mavitrika ao amin'ny Liberty 32 (L32), fikambanana malagasy tsy mitady tombony ara-bola, ahitana mpirotsaka an-tsitrapo tanora. Io fikambanana io dia mampihatra ny fanaovana fikarohana sy fandraisan’andraikitra, izay mifantoka amin'ny fandraisan'anjaran'ny olom-pirenena amin’ny fiainam-pirenena sy ny politika. Ny tanjony amin’izany dia ny hampiroboroboana ny fitantanana mahomby sy ny tany tan-dalàna, ny fanomezana sehatra ny vehivavy sy ny tanora ary ny kolotsaina mifandraika amin’ny filatsahana an-tsitrapo. Andriavina dia misahana ny fandrindrana sy fitantanana ara-bola eto amin’ny faritr’Antanananarivo; mpikambana ao amin'ny ekipa teknika, ary mpanazatra sy mpampiofana mpanampy ho an'ny tetikasany atao hoe Democracy Lab. (D-Lab.) ihany koa izy. Tsy inona izany fa sehatra iray hanaovana fikarohana, famakafakana ary adihevitra mikasika ireo volavolan-dalàna, ireo hetsika mivantana tsy misy herisetra ho an'ny fahamarinana ara-tsosialy ary hanomezana torohevitra ho an’ny tanora mba hamporisihana azy ireo haneho ny heviny.
Nandritra ny volana aogositra 2020, ny fiarahamonim-pirenena Collectif des Citoyens et des Organisations Citoyennes (CCOC), izay niara-niasa tamin'ny UNICEF Madagascar, dia nikarakara fotoam-piofanana momba ny fitantanam-bolam-panjakana mba hanampiana ireo Fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena hahatakatra bebe kokoa ireo olana mifandraika amin'ny fitantanam-bolam-panjakana eo amin'ny sehatry misy azy avy.
Andriavina, niaraka tamin'ny mpikambana hafa ao amin'ny L32, dia nandray anjara tamin'izany fiofanana izany.
Vokatr’io fiofanana io dia nilaza izy fa lasa liana misimisy kokoa amin'ny vaovao mikasika ny toekarem-pirenena sy ny volam-panjakana. Nanokana fotoana tokoa mantsy izy mba hahafahany mahatakatra tanteraka izay voarakitra ao anatin’ny tetibolam-panjakana ary nitsidika ny tranokalan’ny Tahirim-bolam-panjakana malagasy, izay tena haren-dehibe tokoa, araka ny filazany. “Nampitombo ny fahaizako amin'ny maha-mpikatroka mafàna fo ahy ilay fiofanana. Afaka mamita tsara kokoa ny adidiko amin'ny maha olom-pirenena ahy aho – tsy inona izany fa ny fanaraha-maso ny volam-bahoaka. “Ny anton’izany dia mba hisy fiantraikany amin’ny fiainan’ny olom-pirenena tokoa ny vola lany hatramin’ny ariary”, araka ny filazan’ny CCOC. Noho izany, dia afaka nanome ahy fomba fijery tsara kokoa momba ny hoavin'ny firenena sy ny tanora ao aminy io fiofanana io," hoy izy.
Ny tena tanjon'ny Liberty 32 dia ny fanaraha-maso ny fiainam-bahoaka ary indrindra ny Tetibolam-panjakana. Amin'ny maha-mpikambana azy ao amin'ity fikambanana ity dia miandraikitra ny fifandraisana eo amin'ny Liberty 32 sy ny CCOC ihany koa i Andriavina. Nandray anjara mavitrika tamin'ny fomba famolavolana ny tetibolam-panjakana izy, niaraka tamin'ny fikambanana fiarahamonim-pirenena maro, tamin’ny alalàn’ny fanolorana tolo-kevitra ho an'ny PLFI 2021 (tetibolam-panjakana 2021).
Ny fampiofanana tsy tapaka toa izay nokarakarain'ny CCOC miaraka amin'ny UNICEF dia hanosika ny fanjakana hanamafy ny kolotsaina mifandraika amin’ny fandraisan’andraikitra sy ny mangarahara, indrindra eo amin'ny fampiasana ny volam-bahoaka.
Fandraisana anjaran'ny tanora
Serasera ho amin'ny fampandrosoana